Mareykanka oo natiijo hordhac kasoo saaray weerarkii ay ciidankooda ku qaadeen Gaalkacyo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mareykanka oo natiijo hordhac kasoo saaray weerarkii ay ciidankooda ku qaadeen Gaalkacyo
Wakaaladda wararka Reuters ayaa baahisay war-qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, kaas oo lagu sheegay in duqeyntii bishii September 28-deedii ka dhacday duuleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu dilay ciidan maleeshiyo deegaameed, balse aysan ahayn dagaalyahano ka tirsan Xarakadda Al-shabaab.
Qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan dad rayid ah waxyeelo kasoo gaarin duqeyntaasi, balse lagu dilay 10 maleeyshiyo deegaameed oo deganaa duuleedka magaalada Gaalkacyo, halka seddax kalena lagu dhaawacay.
Taliska militeriga Mareykanka ee Afrika (The US millitary’s Africa Command) oo qoraal kale oo qabyo ah xilligii duqeynta dhacday kadib soo saaray ayaa lagu sheegay in howlgalka duqeynta la qaaday, kadib markii ay saraakiisha ciidanka PSF ee Puntland codsadeen in taageero dhinaca cirka ah laga siiyo howlgal ay ku sheegeen inay kula dagaalamayaan xubno ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Dhinaca kale, saraakiisha maamulka Galmudug ayaa hal maalin kadib duqeyntii ay Mareykanka ka geysteen duuleedka Gaalkacyo, waxay ku eedeeyeen maamulka Puntland ee ay xifiltamaan inay warbixin qaldan siiyeen Mareykanka, taasi oo keentay in duqeyn lagu dilo askar ka tirsan maamulka Galmudug.
Sidoo kale, afhayeenka Xarakadda Al-shabaab ugu qaabilsan howlgaladda militeri Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa isagana weerarkaasi kadib u sheegay wakaalladda REUTERS inay wax dagaalyahanno oo ka tirsan kooxdooda aysan ka joogin deegaanka ay duqeeyeen ciidanka Mareykanka.
Ugu dambeyntii, codsi kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dowladda Mareykanka ka codsatay inay faah-faahin ka bixiyaan duqeynta oo ay ciidankooda dhinaca cirka ah ku qaadeen duuleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaasi oo lagu dilay ciidamo la sheegay inay ka tirsanaayeen maamulka Galmudug.